Kedu ihe ọhụrụ na Android 11 Developer Beta na otu esi etinye ya | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | android, General, Nkuzi
Anyị nwere Nleba Mmepe nke 11 Android tupu oge eruo, dị ka ọ na-adịkarị n'ịgba ọnụọgụ, a na-ebu ya atụmatụ ọhụrụ, yabụ o yiri ka ha ga-agbaso ụzọ egosipụtara gam akporo 10, na-emesi ike nche na nzuzo nke data anyi.
O doro anya na Google agbahapụla akwụkwọ ozi ahụ dị ka ihe ngosi maka nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ. Ihe nlere mbu nke Onye Mmepụta bu nke enyere ndị mmepe aka ịmalite ịrụ ọrụ na ngwa ha iji kwadebe ha maka ụdị ọhụrụ ahụ. Ọ gụnyere ọtụtụ mgbanwe na akụkọ nke ga-agbanwe otu anyị si eji gam akporo. N'ebe a, anyị kọwara akụkọ kachasị mkpa ya na otu esi etinye ya.
1 Android 11 ozi ọma
1.1 Nkwado maka ịchekwa akwụkwọ njirimara
1.2 Ederede ihuenyo
1.3 Nzuzo na nche
1.4 Programmable ọchịchịrị mode
1.5 Plagbọ elu mode idebe Bluetooth na-arụ ọrụ
1.6 Egosipụta na mkparịta ụka na ọkwa
1.7 Mgbanwe na ikikere nke ngwa
1.8 Onwe nchekwa maka ngwa
1.9 Pin ngwa ọdịnala na-ekere òkè menu
2 Etu esi wunye gam akporo 11 Onye Mmepụta
2.1 Ngwaọrụ dakọtara
2.2 Kwado nbipu USB
2.3 Download ikpo okwu-ngwa oru
2.4 Meghee Bootloader
Android 11 ozi ọma
Nkwado maka ịchekwa akwụkwọ njirimara
Ihe nke ndi gam akporo na ndi oru iOS choro nke oma, biara na oge a, obu ezie na ngwa di ugbua abiala nke nyere anyi ohere weta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Android 11 na-agbakwunye nkwado maka chekwaa ma weghachite akwụkwọ njirimara.
Google enyebeghị ọtụtụ nkọwa banyere ya, ọ bụ mgbakwunye na-adọrọ mmasị, ebe ọ ga-enye anyị ohere ịme enweghị ụdị akwụkwọ anụ ahụ. Nke a ga-abụrịrị nkwado sitere na steeti iji mee ya iwu.
Android 11 gụnyere ịba uru ndekọ ihuenyo na vidiyo, site na ntọala ngwa ngwa nke ákwà mgbochi ngosi. Ọ dị ka ngwa ọrụ ewepụtara na gam akporo 10, mana ugbu a ọ na-adị mfe ịrụ ọrụ na-enweghị iji menu mmechi. E wezụga na-nyeere na ndabara, ọ dịghị mkpa maka iwu ADB. Ihe ga - aba oke uru maka ndị na - emepụta ọdịnaya.
Na gam akporo 11, a na-etinye ikike pụrụ iche maka ngwa ndị na-arịọ ịnweta ọ bụghị naanị na ọnọdụ kamakwa igwe okwu na igwefoto, yabụ ndị ọrụ nwere ike inye ya nwa oge ikike na ngwa gị. Google ga-akwalite nkwado biometric, nke na-akwado ụdị nyocha atọ iji gboo mkpa nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwaọrụ mkpanaka. Ọ ga-enye onye ọrụ nhọrọ katalọgụ a oku na-aga dị ka spam, ma ọ bụ, tinye onye ọrụ dị ka kọntaktị.
Programmable ọchịchịrị mode
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ụzọ mkpirisi mechara rute gam akporo 10, gam akporo 11 na-agbakwunye mgbakwunye mma: ugbu a ị nwere ike - hazie oge mkpanaka iji eyi oji n’oge. Site na ntọala ngwaọrụ ị nwere ike ịhọrọ na ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-agbanye na akpaghị aka site na mgbede ruo chi ọbụbọ, ma ọ bụ iji setịpụ aka na aka. Nke a bụ ihe dịlarịrịrị na iOS na-enweghị nhọrọ iji gbanwee oge atọ.
Plagbọ elu mode idebe Bluetooth na-arụ ọrụ
Tlezọ aghụghọ ma dị mkpa bụ na ugbu a anyị agaghị ahapụ Bluetooth mgbe ị na-arụ ọrụ ọnọdụ ụgbọ elu, dịka ọ na-eme na nsụgharị nke gam akporo dị ugbu a, nke ọtụtụ bụ nsogbu, ọ bụ ihe dị elu na-achọ ma ha agbakwunye ya. Plagbọelu mode ga-anọgide na-gbanyụọ na WiFi ma ọ bụ netwọk mkpanaka.
Egosipụta na mkparịta ụka na ọkwa
Android 11 gụnyere ngalaba ndị a raara nye mkparịta ụka, ka anyị wee nwee ike ịchọta mkparịta ụka anyị na-aga n'ihu site na ngwa ndị kachasị amasị gị, yana mkparịta ụka ahụ ga - agbakọtaugbua jiri Facebook Messenger). Ndị a na-enwe ohere mkparịta ụka na-ele anya ọbụlagodi na a na-eji ngwa ndị ọzọ. A afụ mmiri mgbe ị natara ozi ọhụrụ, mgbe ịpịrị ya, a na-egosipụta windo na-ese n'elu mmiri nke ị nwere ike ele nkata na zaghachi. Ikwesiri ime ka ha rụọ ọrụ site na ntọala ngosi.
Android 11 na-agbakwunye ikike ịza mkparịta ụka mkparịta ụka yana onyonyo. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike inwe mkparịta ụka nkịtị site na ọkwa ngosi, ihe ga-azọpụta anyị oge.
Mgbanwe na ikikere nke ngwa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nsụgharị ọ bụla nke gam akporo, ụdị mgbanwe ụfọdụ na-ebilite na ntinye ikike, oge a ọ na-eme ka ohere nke nye ikikere na ngwa naanị mgbe anyị chọrọ ya, ka ọnụ ụzọ ghara imeghe kpamkpam.
N'ihe banyere ọnọdụ ahụ, ihe yiri ya na-eme, ugbu a anyị nwere ike inye ikike maka ya ka emee ya eji ebe anyi no mgbe anyi jiri ngwa a choro. Ihe na-enyere aka, na mgbakwunye na ịchekwa nzuzo anyị, ịchekwa batrị nke ngwaọrụ anyị. Nhọrọ ịhapụ ọnọdụ ahụ ruo mgbe ebighị ebi ka dịịrị onye ọ bụla chọrọ ya.
Onwe nchekwa maka ngwa
Ndị mmepe anaghị achọsi ike na nke a, mana ọ bụ ihe ndị ọrụ niile ga-enwe ekele maka, ebe ọ bụ ngwa nwere ike ịnweta naanị folda a raara nye naanị na ọ bụghị ihe niile na ngwaọrụ anyị dị ka ọ mere ruo ugbu a. Ndị mmepe nwere ike ịga n'ihu na-ejigide nnweta ọdịnala maka oge a, nke a ga-agbanwe mgbe ụdị ikpeazụ nke gam akporo 11 pụta.
Pin ngwa ọdịnala na-ekere òkè menu
Ihe m gụsiri agụụ ike ma emesị gbakwunye ya na gam akporo 11, bụ ohere nke ịgbakwunye ngwa na menu kesaa ngwa ngwa ụdị faịlụ ọ bụla, n'ụzọ dị otú a, anyị ga-amanye ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ngwa achọrọ achọrọ apụ n'etiti nhọrọ mbụ.
Etu esi wunye gam akporo 11 Onye Mmepụta
Versiondị a abụghị mmelite oge niile, yabụ na ọ dịghị mkpa ịdebanye aha iji nweta ya. Anyị ga-eji aka wụnye ya, na nke ahụ pụtara na-efunahụ niile ọdịnaya na anyị nwere na ebe nchekwa nke ngwaọrụ, nke mere na nke a anaghị eme eme anyị ga-n'ihu na-eme ka a ndabere tupu oge eruo. Nke ahụ pụtara Anyị ga-enwerịrị ihe bootloader ga-emeghe ma debugging USB rụọ ọrụ.
Pixel 4A / XL na-abịa n'ihu
Kwado nbipu USB
Iji malite, anyị ga-emerịrị nhọrọ ndị nrụpụta, maka nke a ka anyị ga-eme 'Ntọala'> 'Ozi ekwentị' wee pịa ọtụtụ ugboro na 'mkpokọta nọmba'. Ozugbo emere nke a, anyị ga-enwe ike ịnweta nhọrọ ndị nrụpụta, n'ime 'Ntọala'> 'Sistemụ' ma rụọ ọrụ USB Debugging.
Download ikpo okwu-ngwa oru
Ngwaọrụ nyiwe Ọ bụ ngwa ọrụ enyere anyị aka ịgbanwe ekwentị mkpanaaka anyị na windo iwu. Anyị ga-ebudata ya na saịtị gọọmentị Ngwaọrụ nyiwe nke Google. Anyị ga-aga n'ihu unzip faịlụ ZIP.
Unlock kpọghee ekwt Bootloader anyị nwere jikọọ ọnụ anyị na kọmputa site na USB, na windo iwu ahụ na-eme iwu na-esite na folda ahụ Ngwa-nyiwe:
> Kpọghe ngwa ngwa fastboot
Iji igodo olu anyị ga - ahọrọ "Mepee bootloader" ma gosi site na ịpị bọtịnụ ike.
Site na agbachi bootloader na mobile anyị ejikọrọ na kọmputa na USB debugging arụ ọrụ, naanị anyị nwere usoro ndị a:
Download Gam akporo 11 Onye Mmepụta Factory Rom kwekọrọ na ọnụ gị na unzip el Ebe a na-edebe ZIP.
Mepee folda ahụ na-emegheghị ma detuo faịlụ niile na folda ahụ Ngwaọrụ nyiwe.
Na-agba ọsọ flash-niile.bat ọ bụrụ na anyị nọ n'ime Windows, ma ọ bụ flash-all.sh ma ọ bụrụ na anyị nọ Linux ma ọ bụ Mac.
gam akporo 11 A ga-etinye ya na Pixel gị. Cheta na a na-ehichapu data niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Ihe dị ọhụụ na Android 11 Developer Beta na otu esi etinye ya
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na Windows agaghị amalite
Esi achọpụta ma ọ bụrụ na ha na-eji akaụntụ Netflix m